Ihe kpatara ndị mmadụ ji ahọrọ Semalt
Ownersfọdụ ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ na-eche na site na enyemaka nke ederede pụrụ iche, saịtị ha ga-eru ọkwa kachasị elu nke igwe nyocha. Ha na-eche na isi okwu ga-abawanye nlele weebụ, yabụ nnukwu ezumike dị nso. Ọ bụ ihe efu. Ọ bụrụ na ọ dị ka nke a, ọ gaghị enwe mkpa ndị ọkachamara SEO nwere ahụmahụ na ebe njiri SEO kachasị ike. Ọ bụ ihe gbagwojuru anya, na enweghị ndị ọkachamara, azụmaahịa gị n'ịntanetị ga-ewetara gị mmechuihu. N'agbanyeghị ihe niile, Semalt na-aga n'ihu na SEO-njikarịcha weebụsaịtị maka ihe karịrị afọ iri.
Ahụmịhe dị ukwuu na-enye ya ohere ịnagide ọrụ nke ịdị mgbagwoju anya. Semalt chebere ọtụtụ narị saịtị, dọpụta ha n'ụzọ nkịtị. Ọtụtụ nyocha ndị ahịa na-akwado nke a. Na mgbakwunye, ị nwere ike lelee okwu ndị dị na weebụsaịtị anyị, nke na-egosi ezi atụ nke otu esi ụzọ anyị dị. Ọ bụrụ na i kpebiri ịmalite azụmahịa dị egwu, naanị ụzọ gị bụ Semalt. Naanị anyị nwere ike inyere ndị mmadụ aka itinye ego nke ọma. Ọganiihu gị bụ ihe ịga nke ọma anyị, yabụ anyị maara etu anyị ga-esi mee nke ọma.
Ọ bụghị ihe nzuzo na Semalt abụrụla onye isi na njikarịcha weebụsaịtị SEO. O nwere ndi otu di ike nke ezigbo ndi mmadu nwere ike ijikwa oru obula. Nke mbu, obu ndi otu ndi okacha amara nke SEO. Anyị ga-akwụ ụtụ nye ndị njikwa ruru eru, ndị ọkachamara IT, ndị ahịa. A na-ewepụta mmanụ nke sistemụ Semalt dị ike karịa site na ndị ode-akwukwọ, ndị na-ese ihe, na ndị nyocha. Ọ dị mkpa ịmara na ndị ọrụ ọ bụla nwere nnukwu ihe ọmụma SEO dị ukwuu.
N'aka ozo, enwere ike igosi Semalt dika usoro a haziri nke oma maka ikpochapu weebụsaịtị site na teknụzụ SEO kacha mma. Ugbu a ọ bịara doo anya ihe kpatara Semalt enweghị ndị asọmpi ruru eru na mpaghara a. N'ezie, ọnọdụ Semalt ka edochiri anya nke ọma kemgbe ọtụtụ afọ. Taa, ihe fọrọ nke nta ka onye ọ bụla mara na naanị Semalt na-ekwe nkwa inwe ezigbo ihe ịga nke ọma na njikarịcha SEO.
Ihe Anyị Maara Banyere SEO
A na-ejikarị njikarịcha SEO ma ọ bụ Nchọpụta Nchọpụta na lexicon n'etiti ndị ọrụ ịntanetị. Dịka ọ siri pụta, ọ bụghị onye ọ bụla ghọtara ihe okwu a pụtara. Ọzọkwa, ọ bụ mmadụ ole na ole ghọtara nkọwa ya. Anyị ga-emeghe ákwà mgbochi ahụ ma kọwaa ihe ọ bụ. Dịka ị maara nke ọma, ndị ọrụ nchọta ahụ na-enye ndị ọrụ ndepụta aha saịtị dị na nzaghachi nye arịrịọ ha. Ufodu saịtị na-aputa n’elu igwe nchọcha, ebe ndị ọzọ na-ahụ naanị site na iji peeji ole na ole gafere. Nchọpụta ọchụchọ nke weebụsaịtị wepụtara maka ime ka saịtị gị gaa n'ọkwá kachasị elu na igwe ọchụchọ. Ya mere, ọ dị mma ịsị na SEO bụ usoro nke usoro iji bulie ọnọdụ weebụsaịtị na nsonaazụ ọchụchọ, dịka arịrịọ ndị a họọrọ.
Ọ bụrụ, na n'oge gara aga, a na-eji Internetntanetị mee ihe maka ọchụchọ ozi, taa ọnọdụ dị nnọọ iche. Ọnụ ọgụgụ na-abawanye ụba nke ndị na-eji ịntanetị, teknụzụ ọhụrụ, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ agbanwewo Ntanetị ka ọ bụrụ ngwá ọrụ dị egwu na ebe ahịa. Nkwalite ntanetị nwere ike ịba uru maka ụlọ ọrụ ọ bụla ndị nwere ike ị na-ege ntị na-achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ yiri ya na Internetntanetị. Agbanyeghị, ọtụtụ puku mmadụ na-achọ ngwaahịa gị kwa ụbọchị mana chọta ngwaahịa nke ndị asọmpi gị. Nke a bụ n'ihi na ndị asọmpi ọsọ ọsọ ewerelarị ebe kachasị mma na nsonaazụ ọchụchọ. I nwekwara ike kari ndị ga-asọmpi gị. Naanị ihe ị ga - eme bụ ibido nyocha kachasị na Semalt.
N'ezie, njikarịcha nchọta bụ ụzọ dị irè iji dọta ndị ahịa, mana enwere otu ọnọdụ: naanị ndị ọkachamara nwere ike mezuo ya. Isi ihe dị ebe a abụghị n'eziokwu na njikarịcha ebumnuche nwere ike ịta ntaramahụhụ maka weebụsaịtị gị. Mgbe ụfọdụ ọnụọgụ ndị ọbịa na saịtị dị nnukwu, mana ọnụọgụ ndị na-azụ ahịa ka na-eleghara anya. Iji nweta nsonaazụ kacha mma na nkwalite, ịkwesịrị ikpebi ndepụta nke arịrịọ a na-akwalite yana atụmatụ ịkwalite. Ndị ọkachamara Semalt nwere ike ịme mkpebi dị iche iche n'ọnọdụ dị iche iche, yabụ anwala ime atụmatụ na aka gị; kama, tụkwasịnụ ụlọ ọrụ tụkwasịrị obi.
Semalt SEO ngwọta
Mbuli elu SEO gụnyere atụmatụ azụmaahịa dijitalụ nke gụnyere ụfọdụ usoro ezubere maka ịkwalite weebụsaịtị ma ọ bụ akara. Usoro ndị dị otú a na-enye gị ohere ịnweta ọhụụ na ntanetị. Semalt na-enye usoro njikarịcha kachasị mma nke na-ekpuchi ọrụ niile dị mkpa. Ihe ga - esi na ya pụta ga - abụ mmụba n'okporo ụzọ na visiniti webụsaịtị. Ndị kachasị dị irè bụ mkpọsa nke FullSEO na AutoSEO, nke na-ekwe nkwa inwe ihe ịga nke ọma na obere oge. Na mbido, ịkwesiri ịtụle usoro nke enyere na mkpọsa ndị a iji họrọ nke dabara adaba.
Semalt ahọpụtala ọtụtụ usoro maka mkpọsa a, ebumnuche nke ya bụ itinye saịtị gị na ọkwa dị elu na igwe nchọta. Ugbu a, ịkwesịrị inwe nghọta zuru oke banyere ụkpụrụ AutoSEO. Oge niile nke mkpọsa ahụ na-ewere ọnọdụ na mmekọrịta ndị ahịa na otu egwuregwu Semalt. Omume ezubere iche ga-emerịrị na nsonaazụ ndị achọrọ ma ọ bụrụ na ị na-agbaso ntuziaka nke ndị ọkachamara anyị chọrọ ịkwalite saịtị gị. AutoSEO gụnyere ọrụ ndị a:
nhọrọ nke ezigbo isiokwu dị mma;
Iji malite mkpọsa AutoSEO, ị ga-edebanye aha na weebụsaịtị anyị. A ga - eme nyocha ihe omume ndị ọzọ n'ihu site na onye nchịkọta weebụ. Ọ dị mma n'ihi na ntinye gị bụ naanị ịnata akụkọ dị ugbu a na saịtị. Onye nyocha ga-enyocha nhazi nke weebụsaịtị dị ka ụkpụrụ SEO si dị. Mgbe nke ahụ gasị, ị ga-ekenye gị akụkọ izizi banyere ọnọdụ saịtị ahụ yana ndepụta njehie achọpụtara n'oge nyocha ahụ. Achọrọ idozi njehie ndị a ozugbo ịga n'ihu. Injinia SEO anyị ga-enyocha nyocha ahụ wee họrọ akara dị mkpa. Nsonaazụ nke usoro a na-abawanye okporo ụzọ weebụsaịtị.
Nzọụkwụ ọzọ nke mkpọsa AutoSEO ga-abụ nhọrọ nke njikọ ịntanetị ma tinye ha na ntanetị dị iche iche. A na-enyocha ọdịnaya nke ọma maka ịdị adị nke uru edemede. Ọzọkwa, ọ ga-adakọrịrị njikọ ndị ezubere maka ntinye. Usoro anyị niile na-ahụ maka njikwa anyị mgbe niile, yabụ na-ewepụghị iyi egwu ọ bụla na weebụsaịtị. Onye njikwa ahụ na-esokwa ọnọdụ nke njikọ dị na igwe nchọta ma na-ekpebi ókè mkpa akụ dị tupu ịtinye njikọ ndị ahụ.
N'iji nnweta FTP (Protocol Transfer File) na ozi sitere na akụkọ gara aga, ndị ọkachamara Semalt na-eme mgbanwe ndị dị mkpa na weebụsaịtị. Mgbe mgbanwe ndị a gachara, njikarịcha saịtị ahụ na-amalite n’ihu. N'oge mkpọsa ahụ, Semalt na-enyocha mmelite ogo ọ bụla, na-ewebata akara ndị achọrọ. A na-enyocha isi okwu niile maka nnabata maka ọdịnaya. Dịka ị pụrụ ịhụ, ntinye aka gị na usoro a pere mpe, mana ị na-agbaso oge niile na ihe ọ bụla na-eme na saịtị ahụ. N'ihe banyere ọnụahịa ọrụ, ngwugwu AutoSEO kwa ọnwa ga-efu $ 99.
Mgbasa ozi FullSEO
The FullSEO bụ njikarịcha SEO kachasị mma, nsonaazụ nke arụpụtara na obere oge. N’otu aka ahụ, a na-eme ọtụtụ usoro iji meziwanye ọkwa weebụ dị na igwe nchọta. N'ebe a, a na-eme njikarịcha n'ime na mpụga n'okpuru nduzi nke ọkachamara SEO. FullSEO bụ nkwalite SEO na-eme ka ọ dị elu nke na-enye ihe ịga nke ọma na-enweghị atụ na azụmahịa ntanetị. Ọzọkwa, mkpọsa a ga - enyere aka weghachite ndị asọmpi gị niile ogologo oge.
Mgbasa ozi nke FullSEO na-aga n'ihu agba. Iji bido usoro ahụ, ịkwesịrị ịdebanye aha na weebụsaịtị anyị. Nchịkọta ihe owuwu nke websaịtị bidoro, ị na-anata akụkọ zuru ezu. Ndabere na akụkọ ahụ, ọkachamara SEO na-akọwapụta isi okwu mmalite. Nyocha ahụ gosipụtara njehie niile na-egbochi inwekwu ọganihu. A ga-emezi mmejọ ozugbo, mgbe ahụ ọ bụ oge maka ịchọpụta isiokwu. Igodo isi na arụ ọrụ dị mkpa na usoro nke ịba ụba. Site na nnweta FTP, ọkachamara ahụ ga-enye aka mgbanwe niile achọrọ ngwa ngwa. Nke a bụ ọkwa kachasị nke mkpokọta mkpokọta weebụ.
Ọzọ, ọ ga - abụ njikarịcha mpụga. Usoro a gụnyere itinye njikọ na akụrụngwa akụrụngwa. Ihe ndi ozo kwesiri igosiputa ihe di n’ime gi. A ga-atụgharị weebụsaịtị ahụ n'oge na-adịghị anya mgbe ịbikọchara njikọ ndị a, yabụ ndị ọkachamara SEO ga-agbaso usoro a nke ọma. Semalt na-arụ ọrụ nke ọma na ọtụtụ saịtị enwetara, ọ bụ ya mere ndị ọkachamara ji mara kpọmkwem ebe ị ga-abanye njikọ ndị maka njikarịcha nke ọma. Usoro FullSEO na-adịgide n'okpuru nlekọta mgbe niile ruo mgbe ọ gwụchara. Stay na-echechi mgbanwe niile dị na saịtị ahụ. Nweta mkpesa zuru ezu na uto mkpokọta weebụ. N'oge ọ bụla n'ụbọchị, ịnwere ike ịkpọtụrụ onye nwere ọrụ si na Semalt ma chọọ nkọwa dị mkpa.
Enweghị ihe kpatara ị ga - echegbu onwe gị ma ọ bụrụ na anabataghị nkwalite SEO maka ihe ụfọdụ. Agbanyeghị na Google ga - ewepụ weghachi azụlinks niile na ihe ndekọ data n'ime otu ọnwa, ọkwa ga-anọ n'ọnọdụ ụfọdụ. Ranknye ọkwa agaghị adị oke njọ, maka na FullSEO rụrụ ahịa ya. Ọnọdụ ọkwa ga-adị elu karịa mgbe ọ bụla tupu ị na-agba mkpọsa. O siri ike ikpebi ụgwọ ọrụ a ga-akwụ tupu oge eruo: Ihe oru obula bu ihe ndi mmadu. A na-ahọpụta ọnụahịa ahụ mgbe ọkachamara ọkachamara SEO nyochara weebụsaịtị gị wee mee nkwubi okwu ụfọdụ. Ka o sina dị, ego niile ga-akwụsị kpamkpam site na ego mgbasa ozi ga-eweta.
Nchịkọta sitere na Semalt
Nchịkọta data nyocha bụ otu n'ime ihe mepụtara weebụsaịtị nrụọrụ njikarịcha SEO. Semalt karịrị sistemụ asọmpi karịrị nke ahụ. Ihe atụ bụ ọrụ nyocha weebụsaịtị zuru ezu - nchịkọta. Nyochaa na-esote maka ịmepụta akụkọ zuru oke, gụnyere nyocha nke saịtị asọmpi. A na-ahọrọ mkpụrụokwu kachasị dabara adaba, na-etolitekwa ụdị akara, dabere na ọkwa ha. Na ndabere nke mkpuru okwu, a na - ejikarị usoro ọmụmụ ihe kachasị, nke a ga - eji kwalite weebụsaịtị gị n'ọdịnihu. Nke a bụ ndepụta nke ebumnuche maka nchịkọta:
Nchịkọta na-arụ ọrụ ozugbo ị debanyere aha na weebụsaịtị anyị. A na - eme nchịkọta data na akpaghị aka. Na mmecha nke nchịkọta nyocha, ị ga-ekenye gị akụkọ banyere ọnọdụ ebe nrụọrụ weebụ gị dị na nchọta nchọta. Na mgbakwunye, a na-enyocha saịtị ndị asọmpi, kwa, yabụ ị ga-enwe ozi eziokwu banyere ọnọdụ dị ugbu a nke weebụsaịtị ndị ọzọ niile. Ọ bụ uru pụtara ìhè. Na ọkwa nke ihe nrụọrụ weebụ ahụ, a ga-elebara ụkpụrụ SEO niile anya, yabụ, a ga-agbanwe nhazi weebụsaịtị ka ọ dịkwuo mma.
Inwe ezigbo akaụntụ na-enye gị ohere itinye ọnụ ọgụgụ saịtị ọ bụla na kansụl gị. A ga-atụle nyocha weebụsaịtị ọ bụla. Nkwupụta ahụ ga-egosipụta nsonaazụ niile nyocha ahụ; ọ ga-edo anya nke ọma isiokwu ịchọrọ iji. Usoro a ga - agba mbọ hụ na igodo ahụ kwekọrọ n’otú ihe dị n’ime ha si arụ ọrụ. Njikọ nke usoro ndị a ga-enweghị mgbagha ga-ebute mmụba ngwa ngwa maka ịga mkpokọta weebụ. Site n'ụzọ, ịnwere ike itinye ma ọ bụ hichapụ isi okwu ndị ọzọ na mmasị nke gị.
Uru nke ịhọrọ nchịkọta bụ na a na-enyocha webụsaịtị 24 awa ụbọchị. A na-akpachapụ anya na ọganihu ya na-esoro ọbụlagodi mgbe ị na-ezu ike na ị naghị arụ ọrụ ahụ. Ozi banyere ndị asọmpi gị ga - enyere gị aka ịme ihe ziri ezi n'oge ọ bụla, na - anọkarị n'ọnọdụ ndị kachasị elu. Kwesighi iche maka ihe omume ka mma, nchịkọta ga-agwa ihe ị ga - eme. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eji Ntọala Mmemme Ntanetị Ngwa (API), ọ dabara adaba n'ihi na data ahụ na-akpakọrịta na-akpaghị aka, na-enye gị ohere iji mmelite niile. Nchịkọta na-enye ngwugwu tarifu atọ; onye ọ bụla n’ime ha nwere ọnụ ahịa nke ya. Ha bụ:
Semalt na-atụkwa aro ọrụ Web Development. Ihe omume a bu n’obi imepe ebe azụmahịa dị, gụnyere ichepụta ihe ndị mejupụtara ya. Ọ bụ ihe dị n’onwe ya - imewe, njikọta na ngwa ndị ọzọ, yana Sistemụ Njikwa ọdịnaya. Ihe ntinye ndi ozo bu modulu e-commerce nke puru iche na ndi API.
Mmepụta Vidiyo Na-eme Nkwalite
Mmalite nke nnukwu ịntanetị ịntanetị azụmahịa na-emetụta ụfọdụ atụmatụ ahịa. Semalt tụrụ anya na ọnọdụ ahụ, na-atụ aro maka ịmepụta vidiyo pụrụ iche. Vidiyo a nwere ezigbo nkwado, na-egosi uru niile ụlọ ọrụ ọhụrụ a bara. Enwere ike itinye mmemme "Nkwalite vidiyo vidiyo" n'ụzọ abụọ: site na ndebiri na nhọrọ nkeonwe. Na nke ọ bụla, ọnụahịa ahụ dị iche. Dabere na ahụmịhe ndị ọkachamara, 50% nke ihe ịga nke ọma na azụmaahịa n'ịntanetị na-adabere na nnọchite ụlọ ọrụ ziri ezi. Vidiyo anyị welitere ogo ihe ịga nke ọma dị elu karịa.
Ya mere, anyị mere nyocha dị mkpirikpi nke ụlọ ọrụ Semalt, mana kwenyere na ọ bụ naanị ihe a na-akụ fọdụl ma e jiri ya tụnyere uru niile ụlọ ọrụ nwere ike iweta. Ebe nrụọrụ weebụ SEO dị ukwuu karịa naanị nhọrọ isiokwu. Ọ bụ sayensị dum dị maka ndị ọkachamara. Gụọ akụkọ anyị; ị ga-achọpụta na ndị nwara ime ihe n’emeghị Semalt nọ na-arịọ anyị maka enyemaka. Anyị chekwaa ha. Etula oge gi; kama, bido Semill tolite, baa ọgaranya, ma nwee ọ happyụ. Anyị na-eche gị!